Kooxda Liverpool oo la xiriirtay Ismaila Sarr kaddib markii uu soo gabagabeeyey rikoorkoodii guuldarro la’aanta ee Premier League – Gool FM
(Liverpool) 05 Agoosto 2020. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa la soo warinayaa inay xiriir la sameysay xiddiga Naadiga Watford ee Ismaila Sarr kaddib markii uu soo gabagabeeyey rikoorkoodii guuldarro la’aanta ee horyaalka Premier League, waxaana ay doonayaan inay la soo wareegaan.
Waxa ay Reds doonaysaa inay ka soo dukaamaysato saddexda kooxood ee ka laabtay xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League, iyadoo xiriir la sameysay Ismaila Sarr.
22-sano jirkaan ayaa soo jiitay Tababare Jurgen Klopp kaddib markii uu qaatay xiddiga garoonka ugu fiicnaa ee ‘Man of the match’ markii uu bandhig ilqabad leh sameeyey kulankii ay Hornets 3-0 uga adkaadeen Reds bishii Febraayo.
Xiddiga garabka ka ciyaara ayaa labo gool oo dhaqsi leh dhaliyey ka hor inta uusan shabaqa soo taaban Troy Deeney, waxaana ay Liverpool sidaas kula kulantay guuldarradeedii ugu horreysay horyaalka ee xilli ciyaareedka.
Kooxda Watford ayaa heerka labaad u laabatay maalintii ugu dambeysay horyaalka, inkastoo Sarr uu sameeyey bandhig ilqabad leh haddana taasi kama badbaadin kooxdiisa inay heerka labaad u laabato, waxaana xiddigan uu dhaliyey shan gool, waxaana uu caawiyey lix gool oo kale 28 kulan oo uu u ciyaaray.
Haddii ay Kooxda Liverpool ku guuleysato inay xiddigan keento garoonka Anfield, waxaana arki doonnaa Sarr oo ka garab ciyaaraya xiddiga ay qaranka Senegal ka wada tirsan yihiin oo ay saaxiibada yihiin ee Sadio Mane.